Caawinaad U Raadso Qof Kale | Caafimaadka Maskaxda Texas
Khayraad Dheeraad ah
U furnaanshaha iyo helitaanka qofka aad jeceshahay iyo muujinta daryeelkaaga iyo dareenkaaga ayaa noqon kara caawimaadda ugu weyn ee dhammaan. Daryeelka iyo taageerida qoyska, asxaabta, iyo kuwa kale ee aad jeceshahay wax weyn ayey uga beddeli kartaa qof la nool caafimaadka maskaxda ama cillad isticmaalka maandooriyaha, ama qof si fudud u maraya waqti adag. Mid ka mid ah siyaabaha aad ku caawin karto ayaa ah inaad diyaar u tahay inaad la hadasho, ka caawi iyaga inay wicitaanno taleefan ah sameystaan ballamo, iyo inaad u soo bandhigto inaad la socoto ballamaha ay leeyihiin xirfadle caafimaad. Dareemidda keli ahaanta ama culeysku waa wax caadi u ah shakhsiyaadka la kulma caqabado caafimaad maskaxeed, sidaas darteed kaliya ogaanshaha inaad halkaas u joogto iyaga ayaa si weyn u caawin kara.
Markii aad qof aad jeceshahay kala hadlayso caafimaadka maskaxda, iskuday inaad noqoto mid taageero, furfurnaan, iyo dulqaad leh intii suurtogal ah. Arrimaha caafimaadka maskaxda waxay u noqon karaan wax aan caadi ahayn oo laga hadlo, gaar ahaan qof durba dareemaya kaligiis, wareersan, ama ka adkaaday. Xusuusnow in mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan, waxtar leh ee aad sameyn kartid ay tahay la xiriirka qofka aad jeceshahay ee aad daryeesho. Waxa kale oo waxtar leh in xoogga la saaro dhegaysiga halkii laga “saxi lahaa” dhibaatada.
Qofka aad jeceshahay ogeysii in waxa ay dareemayaan iyo waxa ku dhacaya aysan khaladkooda ahayn oo ay aad uga badan tahay sida dadka badankoodu moodaan. Sidoo kale waad u ogeysiin kartaa inay rajo jirto!
Inaad aqoon u leedahay caafimaadka maskaxda waxay kaa caawin kartaa inaad siyaabo badan u taageerto. Haddii aad taqaano calaamadaha cudurada ugu badan, si fudud ayaad u ogaan kartaa. Waxaa intaa dheer, kolba sida aad wax uga ogaato arrimaha caafimaadka maskaxda, ayaa aad u xasaasi u noqon karta waxa laga yaabo in qofka aad jeceshahay uu soo maro. Waxaad wax ka baran kartaa qaar ka mid ah jirrooyinka ugu caansan oo aad mid walba ka heli kartaa ilo ku saabsan annaga Bogga Xaaladaha Caadiga ah iyo hel cutubyada tababarka ee bilaashka ah ee internetka .
Waxaad sidoo kale taageeri kartaa qofka aad jeceshahay adiga oo ka caawiya iyaga inay gaaraan go’aanno xog-ogaal ah oo ku saabsan daryeelka raadinta haddii taasi ay tahay waxa ay go’aansadaan inay sameeyaan. Laakiin xusuusnow, doorashada ayaa ugu dambeyntii iyaga ku xiran. Raadinta daaweynta marka aad durba isku dayeyso inaad la qabsato astaamaha xaaladda caafimaadka maskaxda waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah oo cabsi leh. Haysashada qof adiga kaa daneeya oo u jooga inuu ku taageero waa lama huraan. Marka lagu daro akhrinta xaaladaha caafimaadka maskaxda, waxaad raadin kartaa macluumaad la isku halleyn karo, sharci ah iyo ilo aad kula wadaagi karto qofka aad jeceshahay.
Haddii qofka aad jeceshahay u maleeyo inay qabaan arrin caafimaad maskaxeed laakiin uusan hubin, waxay qaadan karaan baaritaan online oo lacag la’aan ah oo khaas ah sida kuwa Goobta Caafimaadka Maskaxda Ameerika (MHA) . Waxay leeyihiin baadhitaano badan oo kala duwan oo, xagga hoose ee bogga, waxay bixiyaan talo ku saabsan baaritaanka la qaadayo. Kadib marka uu qof sameeyo baaritaanka, waxaa la siin doonaa macluumaad, ilo, iyo qalabyo ka caawiya fahamka iyo hagaajinta caafimaadkooda maskaxeed.
Qaab kale oo lagu caawiyo qofka aad jeceshahay waa inaad ka caawiso inay helaan daryeel caafimaad haddii ay go’aansadaan inay daaweeyaan daaweyn ama ay doonayaan inay eegaan baaritaanka cudurka. Hal dariiqo oo lagu heli karo daaweyn waa iyadoo la adeegsanayo qalabkeenna Raadi Bixiye. Haddii ay aad ugu kalsoon yihiin inay marka hore arkaan dhakhtarkooda caadiga ah, ku dhiirrigeli inay sidaa sameeyaan. Waa muhiim inaad xasuusato in bixiyeyaasha qaarkood ay lahaan karaan liisas sugitaan. Haddii qofka aad jeceshahay uu tan ku soo gaaro raadintooda adeeg bixiye, waxaad ka caawin kartaa iyaga inay ka dukaameystaan agab bixiyeyaasha kale, ku dhiirrigeli isticmaalka is-daryeelidda inta ay sugaan taariikhaha ballanta, iyo tan ugu muhiimsan, ku dhiirrigeli inaysan ka daalin raadintooda caawimaad.
Waxaad sidoo kale ku deeqi kartaa inaad sameyso ballamahaas ugu horreeya ama aad raacdo qofka aad jeceshahay dhakhtarka. Tallaabooyinkan bilowga ahi way adkaan karaan haddii qofka aad jeceshahay uusan lahayn tamar badan, ama uu dareemayo walaac badan, ama ay dhibaato ka haysato feejignaanta. Intaa waxaa sii dheer, ka caawi qofka aad jeceshahay adoo ka caawinaya inay la yimaadaan liis su’aalo ah oo aad weydiiso dhakhtarkooda ama bixiyaha daaweynta. Way ku caawin kartaa inaad la gasho ballan liis su’aalo qoran ah si aysan u ilaawin inay sheegaan macluumaad muhiim ah.
Weydii qofka aad jeceshahay sida aad u caawin karto. Iyaga ayaa khabiir ku ah waxa ay soo marayaan markaa waxay kuu sheegi karaan sida ugu fiican ee ay u baahan yihiin.
Haddii adiga ama qof aad danaynayso uu hadda la kulmayo dhibaato, fadlan caawimaad u raadi isla markiiba!
Ka xulo liiska Degmooyinka hoose.
Garaac 2-1-1 , ikhtiyaarka 8
Nambarka Dhibaatada ee Maskaxda Caafimaadka Maskaxda ama Maamulka Caafimaadka Habdhaqanka
Soo hel LMHA xaafaddaada oo wac khadkooda dhibaatada.
Nooca Ka Hortagga Ismiidaaminta Qaranka
Wac 1-800-273-HADAL (8255);
Haddii aad tahay ruug -caddaa, riix 1.
Lifeline -ku waa khad lacag la’aan ah oo qarsoodi ah oo ay heli karaan qof walba 24/7. Lifeline -ku wuxuu isku xiraa dadka soo waca xarunta dhibaatada ugu dhow ee shabakadda qaranka Lifeline. Xarumahani waxay bixiyaan la -talinta dhibaatooyinka iyo gudbinta caafimaadka maskaxda. Dadka dhagoolaha ah, maqalka adag, ama qaba lumis maqal waxay la xiriiri karaan Lifeline via TTY at 1-800-799-4889 .
Khadadka Qoraalka Qalalaasaha
Ku qor “HELLO” 741741
Khadka taleefanka qalalaasaha waxaa la heli karaa 24/7. Khadka Crisis Text Line wuxuu u adeegaa qof kasta, nooc kasta oo dhibaato ah, isaga oo ku xiraya la-taliyaha arrimaha dhibaatooyinka kaas oo bixin kara taageero iyo macluumaad.
Khadka Dhibaatada Halyeeyada
Wac 1-800-273-HADAL (8255) oo riix 1
ama qoraal u dir 838255
Khadka Dhibaatooyinka Halyeeyadu waa kheyraad lacag la’aan ah, qarsoodi ah oo isku xira halyeeyadii 24 saac maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii oo leh jawaab bixiye tababaran. Adeeggu wuxuu diyaar u yahay dhammaan halyeeyadii hore, xitaa haddii aysan ka diiwaan gashanayn VA ama aysan ka diiwaan gashanayn daryeelka caafimaadka VA. Dadka dhagoolaha ah, maqalka adag, ama qaba lumis maqal ayaa wici kara 1-800-799-4889 .
Mashruuca Trevor – Caawinta Isdilka ee LGBTQ
Booqo goobta ama wac 866-488-7386
Ku qor “BILOW” 678780 ama ku sheekeyso internetka.
U adeegso aaladdayada Raadi Bixiye si aad u hesho bixiyeyaasha adeegga caafimaadka maskaxda iyo dhaqanka.
Booqo annaga Caafimaadka Dabeecadda eLearning Hub si aad u hesho ilo badan oo ku saabsan sida aad u caawin lahayd naftaada iyo dadka kale ee qaba xaaladaha caafimaadka hab dhaqanka.
Aad Hubka eLearning
Is ogow naftaada
Ugu dambayn, daryeelka naftaadu waa muhiim si loo hubiyo inaad qof kale caawin karto. Marka laga hadlayo caafimaadkaaga adiga oo caawinaya qof kale, tixgeli inaad samayso waxyaabo aad ku maareynayso culeyskaaga sida madadaalada, cunista caafimaad, firfircoon, ama la hadalka qof kale. Waxaad la xiriiri kartaa qof aad taqaan ama tixgeli inaad ku biirto kooxda taageerada xubnaha qoyska dadka qaba xaaladaha caafimaadka dhimirka. Haddii aad xiisaynayso inaad wax badan ka ogaato maareynta walaaca iyo daryeelidda caafimaadkaaga maskaxda, waxaad xor u tahay inaad soo booqato annaga Bogga Fayoqabka Caafimaadka Maskaxda iyo khayraadka .
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo ilo:
Caafimaadka Texas iyo Adeegyada Aadanaha – Macluumaad Ku Saabsan Caafimaadka Maskaxda Dadka Waaweyn ee Texas.
Caafimaadka Texas iyo Adeegyada Aadanaha – Macluumaad Ku Saabsan Caafimaadka Maskaxda Carruurta.
Caafimaadka Maskaxda Ameerika (MHA) – Waxaan Qof kale u Raadinayaa Caawimaadda Caafimaadka Maskaxda .
MentalHealth.gov bogga asxaabta iyo xubnaha qoyska.
Caafimaadka Maskaxda Ameerika – Macluumaad iyo Khayraad ku Saabsan Sidaad Naftaada u daryeeli lahayd.
Isbahaysiga Qaranka ee Xanuunka Maskaxda (NAMI) – Macluumaad Sida Loo Caawiyo Qofka Xanuunka Maskaxda qaba.
Isbahaysiga Qaranka ee Xanuunka Maskaxda (NAMI) Qoyska iyo Asxaabta -Siminaar soconaya 90 daqiiqo ama afar saacadood oo lacag la’aan ah oo lagu wargelinayo dadka ay jecel yihiin ee qaba xaaladda caafimaadka dhimirka sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo. Sidoo kale waa fursad aad kula kulanto dad kale oo ku jira xaalado la mid ah oo aad ku hesho taageero bulshada.
Isbahaysiga Qaranka ee Xanuunka Maskaxda (NAMI) Kooxda Taageerada Qoyska -Kooxda taageerta faca oo hoggaamisa qof kasta oo qaangaar ah oo leh qof la jecel yahay oo la kulmay astaamaha xaaladda caafimaadka dhimirka. Faham ka hel caqabadaha iyo guulaha dadka kale ee la kulma waaya -aragnimadaas oo kale.
NAMI – Macluumaad ku saabsan daryeelka naftaada haddii aad tahay xubin qoyska ka tirsan ama daryeele qof qaba cudurka dhimirka.
Waxaa kafaala qaaday Golaha Isuduwaha Caafimaadka Habdhaqanka Gobolka oo dhan. Right Xuquuqda daabacaadda 2022.